Oay! Alefaso tsara ny sidinao Lufthansa avy any Eropa mankany Etazonia izao
Home » Lahatsoratra farany farany » Aviation » Oay! Alefaso tsara ny sidinao Lufthansa avy any Eropa mankany Etazonia izao
Airlines • Airport • Aviation • Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Vaovao Mafana Alemana • Vaovao • Tourism • Etazonia Vaovao Vaovao
Lufthansa manidina olona 76,000 avy amin'ny seranam-piaramanidina Frankfurt amin'ny faran'ny herinandro fialan-tsasatra voalohany
Herinandro teo ho eo taorian'ny famaranana ny fameperana ny dia nataon'i Etazonia dia nahitana fisondrotana bebe kokoa ho an'ny sidina mankany Etazonia ny seranam-piaramanidina Lufthansa Group.
Tamin'ny andro sasany tamin'ny herinandro lasa, nitombo avo telo heny ny sidina namakivaky ny Atlantika tamin'ny herinandro teo. Ny fangatahana tamin'ny herinandro lasa teo amin'ny làlana sasany saika nahatratra krizy mialoha
ambaratonga. Ny sidina miaraka amin'ny SWISS avy any Zurich sy Lufthansa avy any Frankfurt mankany New York ary avy any Frankfurt sy Zurich mankany Miami dia manana famandrihana avo indrindra avy amin'ireo mpandeha fialamboly na mpandraharaha. Tamin'ny tapakila Premium Economy, Business ary kilasy voalohany dia nisy novidina ny USA mihoatra ny tamin'ny vanim-potoana mitovy tamin'ny 2019.
Herinandro eo ho eo taorian'ny famaranana ny fameperana ny dia any Etazonia, Lufthansa Group
Ny orinasam-pitaterana an'habakabaka dia miaina fisondrotana bebe kokoa ho an'ny sidina mankany Etazonia. Azo antoka
andro tamin'ny herinandro lasa, nitombo avo telo heny ny sidina namakivaky ny Atlantika
Ny fangatahana tamin'ny herinandro lasa teo amin'ny làlana sasany saika nahatratra krizy mialoha
ambaratonga. Sidina miaraka amin'i SWISS avy any Zurich sy Lufthansa avy any Frankfurt mankany New York
ary avy any Frankfurt sy Zurich ka hatrany Miami no nahazo ny famandrihana avo indrindra tamin'ny fialamboly roa
sy ireo mpanao dia lavitra.
Tamin'ny tapakila Premium Economy, Business ary kilasy voalohany dia nisy novidina ny USA mihoatra ny tamin'ny vanim-potoana mitovy tamin'ny 2019.
Lufthansa Group dia mihaona an'io fitomboana io amin'ny fangatahana mihombo amin'ny alàlan'ny fandefasana fanampiny
sidina mankany Etazonia amin'ny fotoana fohy. Lufthansa sy SWISS, ohatra, dia hanolotra sidina mitambatra telo isan'andro mankany Miami amin'ny fampandrenesana fohy manomboka amin'ny
Betsaka ny fangatahana sidina mankany Etazonia amin'ny volana Desambra ho avy. Vaovao
ny famandrihana tamin'ny herinandro lasa ho an'ity volana ity dia avo tahaka ny tamin'ny taona 2019 ho an'ny
ny vanim-potoana mitovy. Sidina mankany New York - nentim-paharazana be fangatahana mandritra ny
ny vanim-potoanan'ny Noely - dia efa nohamafisina tamin'ny fifandraisana fanampiny.
Ny seranam-piaramanidina ao amin'ny Vondrona Lufthansa dia manolotra fifandraisana 55 hatramin'ny XNUMX isan-kerinandro
New York avy amin'ny foiben'izy ireo any Eropa, Austria, Belzika, Alemana ary
Suisse tamin'ny Desambra. Fanitarana serivisy maharitra bebe kokoa amin'izao fotoana izao
Iray mankany New York sy Chicago, ny seranam-piaramanidina Lufthansa Group dia manolotra fifandraisana isan'andro bebe kokoa avy any Eropa amin'ny volana Novambra noho ny sidina mankany amin'ny faritra Azia-Pasifika iray manontolo.
Antoka Lufthansa dia manantena fa ny fisokafan'i Etazonia amin'ireo mpanao dia lavitra dia mamaky vaksiny
dia ho fambara ho an'ny firenena sy ny faritra hafa hanamora ny fivezivezivezy iraisampirenena indray ary hampihemotra ny fameperana ny dia.
Sidina fanampiny koa ao anatin'ny Alemana
Lufthansa Group koa dia mampitombo ny sidina anatiny alemana mankany amin'ireo ivon-toerany eropeana
satria mitombo hatrany ny fangatahana sidina amerikana. Ohatra, raha ampitahaina amin'ny Jolay,
Lufthansa dia mampitombo ny sidina Alemanina anatiny hatramin'ny 45 isan-jato hatramin'ny fiandohany
Oktobra Midika izany, ankoatry ny zavatra hafa, amin'ny volana oktobra dia hisy sivy fa tsy sidina enina isan'andro avy any Frankfurt mankany Berlin. Ny sidina avy any Frankfurt mankany Hamburg dia hitombo amin'ny sidina enina ka hatramin'ny valo isan'andro. Toy izany koa ny any Munich:
Ny fifandraisana dimy isan'andro any Berlin dia hampitomboina ho fito manomboka amin'ny
Oktobra; fa tsy sidina enina isan'andro avy any Munich mankany Hamburg, dia hiakatra hatramin'ny
Sidina isan'andro 11 amin'ny ho avy. Ary manomboka amin'ny volana oktobra koa, i Lufthansa dia hiasa sidina isan'ora avy any Hamburg sy Berlin mankany amin'ireo foiben'izy ireo any Frankfurt sy Munich ny maraina sy ny hariva.
Miaraka amin'ny fanitarana ny fandaharam-potoanan'ny sidina, misy fifandraisana maro hafa hita manerana ny
andro Midika izany fa ireo mpandeha raharaham-barotra izay te-hanidina maraina matetika na ny
ny hariva dia handray soa amin'ny fandaharam-potoanan'ny sidina nohatsaraina toy ny mpandeha hafa ihany koa.
Tatitra vaovao momba ny fizahantany momba ny fizahantany avy amin'ny iray hafa...